Welthungerhilfe: Imaammata dhuunfaa
Nuyi, Deutsche Welthungerhilfe e. V., eegumsa daataa dhuunfaa kee cimsinee goona. Bu’uura qajeelfama eegumsa daataatiin fi Imaammata Dhuunfaatiin iccitiidhaan daataa dhuunfaa kee eegna.
Akka qajeelfamaatti, daataa dhuunfaa osoo hin dhiyeessin marsariitii keenya fayyadamuun ni danda’ama. Akkuma beekamu daataa dhuunfaan (fkn maqaa, teessoo, yookiin teessooi meelii )weebsaayitii keenya irratti walitti qabameera, kunis bu’uura fedha qabeessummaatiiniidha. Fedha keessaniin ala daataan kun qaama sadaffaaf qoodamuu hin danda’u.
Daddabarsi daataa qilleensarraa (fkn quunnamtii imeelii wajjin hidhata kan qaban) icciitii dogoggoraaf banaadha. Daataa guutummaan guututti qaama sadaffaan akka hin arganne gochuun hin danda’amu.
Daataaleen kun nama dhuunfaa wajjin walqabachuu hin qaba fi madda daataa biro wajjin walqunnamuu hin qabu.
Ittigaafatamummaa Garee fi Odeeffannoo Walqunnamtii:
Imaammanni Dhuunfa kan hoogganu adeemsa daataa:
1. Odeeffannoo Waliigalaa
Imaammata Dhuunfaa kana keessatti, akaakuu, qabiyyee fi kaayyoo adeemsa daataa dhuunfaa tajaajila qilleensa Deutsche Welthungerhilfee. irratti ibsineerra. V fi marsariitiin kanaan walitti dhiyaatan, hojiiwwan, fi qabiyyeewwan (kana booda “Marsariitii” jedhamee kan waamamu). Imaammanni Dhuunfaa kan hojjetu qixa sirna, waltajjii, fi meeshaalee (kompuutera miinjaalaa yookiin meeshaalee moobaayilii) nama dhuunfaa kanneen tajaajilli ittin qilleensa irra oolanidha.
Bilbila: +49 (0)228-2288 176
Faaksii: +49 (0)228-2288 250
Jechoonni kan akka “Daataa Dhuunfaa” yookiin “Adeemsa” haala walfakkaatuun kan hiikaman bu’uura § 4 Qajeelfama Eegumsa Daataa Waliigalaatiinidha (QEDW). Marsariitii fayyadamuun ni danda’ama –kan hawaasaa ala- kaayyoo odeeffannootiif daataa nama dhuunfaa dhiyeessuu osoo hin dabalatiin (§§ 9, 10, 12 ilaali).
Bu’uura qajeelfama daataa qabatamaa ta’een daataa nama dhuunfaa fayyadamtoota hojjetamuu gooneerra, kunis tajaajila qilleensa irraa ni dabalata, fayyadamaan mirkanaa’eera yookiin barbaachisummaa fedhii seera (fkn xiinxala fedha, gahaa gochuu fi hojii daldalaa fi bu’uura § 6.1(f) tiin sarara gubbaatti nageenyummaa eeguu GDPR- keessumaayyuu hamma gahe safaruu, kaayyoo gabaa fi uummataatiif namoota dhuunfaa qopheessuu, galumsa daataa walitti qabuu, fi tajaajilawwan dhiyeessitoota garee sadaffaa fayyadamuu.
Qabiyyee kanaan, jechi “fayyadama“ jedhu namoota adeemsa daataa fayyadaman kamiyyuu ofitti hammata, kunis donaroota keenya, sharikummaa gamtaa, gareewwan fedha qaban, fi kanneen biroo sarara keenya daawwataniidha. Jechoota fayyadamaman fkn “fayyadamaa“, saala irraa bilisa.
Akkuma beekamu bu’uura §§ 6.1(a), 7 GDPR seerummaan wanti mirkaneeffamu daataa nama dhuunfaa fi kaayyoo dirqama seeraa keenya guutuudha (§ 6.1(c) GDPR) fi kaayyoo fedha seerummaa keenya eegudha(§ 6.1(f) GDPR).
Deeggarsa gochuuf fedha qabda yoo ta’e, deeggarsa gochuuf wantoota gargaaran kan akka odeeffannoo dhuunfaa fi maqaa kee si gaafanna. Daataan kee karaa SSlL- hidhata jiru fi Jarman keessatti bakka addaa keessatti ni kuufama. Tajaajila kana kan argatan namoota muraasa kiliraansii addaa qabanii fi deeggarsa daldalaa fi tekinikaala irratti hirmaannaa kanneen godhaniidha. Mirkaneessa ibsa kee ala daataan kee garee sadaaffaaf hin qoodamu.
Daddabarsi daataa qilleensarraa (fkn quunnamtii imeelii wajjin hidhata kan qaban) icciitii dogoggoraaf banaadha. Daataa guutummaan guututti qaama sadaffaan akka hin arganne gochuun hin danda’amu. Daataan dhuunfaan kara walitti hidhinsa (SSL) tiin iccitiidhaan darbuu dha.
2. Tarkaanfii Icciitii
Daataadhaaf eegumsa gochuuf tarkaanfii iccitii eeguu kan akka aartii dhaabbataa, kontiraataa, fi tekinikaala fudhanneerra fi baduu, manca’uu yookiin namoota dhuunfaa hin heyyamamneef akka baay’atan gochuu ni hir’isa.
Tarkaanfii icciitii jedhame dabarsa daataa biroowusarii fi sarvarii gidduu jiru ni hammata.
3. Daataa Kee Garee Sadaffaa Fi Dhiyeessitoota Garee Sadaffaa Wajjin Qoodu
Tajaajilawwan keenya dhiyeessitoota tajaajila alaatiif yoo dhiyeessine, kunis bu’uura § 28 GDPRkanraawwatamuta’a. Tokkoon daataadhaaf adeemsa kontiraata murteessuuf xumurreerra kunis daataan kee akkaataa kaayyoo isaaniitiin hojjetamuu fi kan hin qoodamne ta’uu isaati. Daataa dhuunfaa kee eeguuf tarkaanfii dhaabbataa fi tekinikaalaaf wantoota mijatoo ta’an ni fudhanna.
Kunis dhiyeessitoota tajaajilaaf raawwataminsa ni qabaata garuu kanneen armaan gadiitti hin daangeeffamu:
i-gelb GmbH, Bruesseler Str. 89-93, 50672 Cologne: Qophii fi suphaa marsariitii
micropayment GmbH, Scharnweberstrasse 69, 12587 Berlin: Daddabarsa kaffaltii sarara irraa gumaachotaa
Episerver GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin: Dhiyeessa tajaajilaaf erguu fi gaazexaa erguu ( § 12 ilaali)
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: Xiinxala marsariitii fi gabaatti al lama dhiyeessuu ( §§ 8, 9 ilaali)
Falcon.io ApS, H.C. Andersens Boulevard 27, 1., 1553 Copenhagen V, Denmark – Xiinxala fi quunnamtii midiyaa hawaasaa
Akkuma qabiyyee irratti ibsamee ture meeshaalee yookiin wantoonni bu’uura imaammata dhuunfaa kanaan hojjetaman (Kana booda walitti qabaatti “Dhiyeessitota Garee- Sadaffaa“) biyyaa sadaffaatti kan galmaa’e, daataan galmee biyya Dhiyeessitota Garee- Sadaffaatti ni darba jedhamee ni yaadama. Biyyi sadaffaan biyya GDPR kallattiinhojiiirrahinoolle fi biyyoota gamtaa Awurooppaa fi naannoo dinagdee Awurooppaa ala ta’an ni hammata. Daataan bifa sadarkaa eegumsa daataa mijataa ta’een, mirkaneessa fayyadamaatiin, yookan bifa mirkaneessa birootiin biyya sadaffaatti darbuu ni danda’a.
4. Unka Quunnamtiin Walqunnamtii Gochuu
Weebsaayitiin keenya gaaffii kee gara keenyatti akka ergituuf filannoo baay’ee kan kennuu fi walqunnamtii SSL kan raawwatuudha. Bu’uura § 6.1(a) GDPR daataa fi odeeffannoon barbaachisu gaaffiin kee akka ilaalamu ni ta’a.
Marsariitii keenya irratti ilaalcha yoo kennite, teessoon IP kee bu’uura fedha seera keenyaan § 6.1(f) GDPR. Guyyaa torbaaf kuufamee ni taa’a. Imaammanni kuusaa kun icciitii keenya eeguuf kan ooludha. Namni wantoota seera qabeessa hin taane ilaalcha kenne (kan akka arrabsoo, proppogaandaa siyaasaa dhorkamaa kkf) ofii keenyan kan himannu ta’ee eenyummaa barreessaa kan barbaadu ta’ee argama.
6. Galumsa Daataa fi Faayiloota-Cufaa
Bu’uura fedha seera keenyaan § 6.1(f) GDPR,yeroo hundumaa daataa walitti qabne galumsa tajaajila sarvariif ( Faayila cufama sarvariif ) ni fayyadamna. Galumsi daataa kan of keessatti hammatu:
Teessoo IP kompuutaraa gaaffii ergu
Galumsa guyyaa fi yeroo
Maqaa fi fuula galumsaa URL
Wayita daddabarsa fuulaa hamma daataa ergamee
Haala galumsaa (Fuula darbe, fuulli hin jiru kkf)
Browusarii fi sirna hojii daataa
Tajaajila marsariitii akka qabxii galumsaatti
Sababa iccititiif (fkny dhimmoota akka sobaa fi loogii furi), odeeffannoo faayila-cufaa erga haqamee booda yoo xiqqaate guyyaa torbaaf kuufame taa’a. Daataan kaayyoo mirkaneessaaf hammi dhimmii isaa haalan ilaalamuttti guutummaatti osoo hin haqamiin taa’uu qaba.
7. Kuukii fi Safartoo Gahaa
Kuukiin daataa sarvaarii marsariitii keenya irraa yookiin sarvarii marsariitii qaama sadaffaa irraa gara fulduraatti akka ilaalamuuf kan darbuudha. Kuukiin bifa faayila xiqqaa yookiin bifa kuusaa odeeffannoo xiqqaadha. Bu’uura Imaammata Dhuunfaa kanaan,tarkaanfii gahaan hojii kuukii kamiyyuu sitti ni himama.
Kuukiin kamiyyu kompitara kee irratti akka hin kuufamne ni barbaadda yoo ta’e, sirna browusarii filannoo siif kennamu irraa akka hin hojjenne gochuu ni dandeessa. Kuukiin kuufame sirna browusarii kee irraa qulqullaa’uu ni danda’a. Kuukii akka hin hojjenne gochuu hojii marsariitii kee daangessuu ni danda’a.
Kaayyoo gabaatiif beeksisa Neetworkii onnachiisuuf kuukii fayyadamuu ni dandeessa kunis fuula akka hin hojjenne (http://optout.networkadvertising.org/) fi karaa marsariitii US (http://www.aboutads.info/choices) yookiin marsariitii Awurooppaa (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
8. Xiinxala Googilii Fayyadamuu
Bu’uura seera fedha hojii keenyaan (fedha xiinxala fi hiikan guddisuu ) § 6.1(f) GDPR), XinxalaGoogiliinihojjenna, xinxalaweebiitajaajilaGoogiliindhiyaatu(“Google”).
Xiinxalli Googilii xiinxala weebsaayitii keetti fayyadamuuf kuukii kee (ilaali § 7) nifayyadma. Fayyadamaan daataa kee weebsaayitii kuukii irraa madde fi USA keessatti gara Googil Sarvariitti darbee fi achitti ni kuufama. Googiliin cancala hojii dhuunfaa mirkanaa’e, wabummaan isaa seera eegumsa daataa Awurooppaatiin ni ilaalama. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=active).
Googiliin daataa kana bu’uura qajeelfama keenyaan fayyadamee tajaajilli sarara keenya akkamitti faayidaa irraa akka oolu ni madaala, waa’ee sochii sarara irraa gabaasa ni dhiyeessa, fi tajaajila qilleensa irraa kana fi intarneetii fayyadamuuf tajaajila dabalataa ni hojjeta. Haaluma kanaan eenyummaa fayyadamaa daataa hojjetame irraa madduu ni danda’a.
Beeksisa agarsiisuuf xinxala Googlii karaa tajaajila beeksisa Googilii ni hojjenna fi hiriyyuummaan isaa fayyadamtoota akka kanaaf qofa yoo ta’u kunis akka fedha tajaajila qilleensa irra jiruu yookan akka caasaa waliigalatti (fkn fedha mata duree irraa yookan oomisha weebsaayitii daawwatameen kan murteeffamu) Googilii irratti kan qoodnu (kunis“Remarketing Audiences” yookin “Google Analytics Audiences”kanjedhamu). Akkasumas beeksisoonni keenya kan fayyadamtoonni fedhanii fi isaan hin aarsine ta’uu isaa mirkaneeffachuuf Remarketing Audiences ni fayyadamna.
“anonymizeIp” gara xinxala Googilitti dabalameera kunis walitti qaba daataa IP (IP masking) mirkaneeffachuuf gargaara. Kana jechuun Googiliin fayyadamaa kan xiqqeesseef teessoon IP miseensa gamtaa Awurooppaa keessatti yookan naannoo dinagdee Awurooppaa kan keessatti kan raawwatudha. Dhimma adda ta’eef teessoon IP guutuun gara sarvarii Googilii USA tti darbee xiqqaatee jiraachuu ni danda’a. Teessoon IP browusarii fayyadamaatiin darbu Googilii keessatti hammatamuuf daataa biroo wajjin wal hin qunnamu. Browusarii soofweriitiin kuukiin akka hin kuufamne ittisuun ni danda’ama; garuu, kun hojii marsariitii guutummaatti irraa si dhorkuu ni danda’a.
Dabalataan, Googiliin daataa akka walitti hin qabne fi hojii irra hin olchine kunis daataawwan kuukiin tajaajjla sarara irraa maddeen walqabatee jiruu buusuun fi biroowusarii sirreessuun akkaataa armaan gadiitiin dhorkuu ni dandeessa.link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Marsariitii armaan gadiitti fayyadamuun xiinxala Googil daataa kee irratti kennu dhorkuu ni dandeessa. Kunis gara fulduraatti marsariitii kee yeroo daawwuttu daataa kee akka hin qabamne gargaara: Raawwii Googlii Keessaa Dhabamsiisuu
Yoo karaa yoomessa birowsarii kee kana yookiin kuukii hundumaa balleessite, kuukii dhiis-filannoo kana haaressuu hin dagatin.
Karaa Googilii daataa fayyadamuu odeeffannoo dabalataaa barbaaduu ni dandeessa akkasumas weebsaayitii armaan gadii irratti: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB (“How Google uses information from sites or apps that use our services”), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB (“Advertising”), http://www.google.de/settings/ads (“Control the information Google uses to show you ads”).
9. Googlitti Fayyadamuu
Bu’uura fedha seera hojii keenyaatti (fkn fedha xinxalaa fi hiika keessatti ol guddisuu § 6.1(f) GDPR), tajaajila gabaa fi fayyadama isaa ni hojjenna (“Google Marketing Services”) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Googiliin karaa seera dhuunfaa, wabummaan isaa ilaalamee bu’uura seera eegumsa daataa Awurooppaatiin galmaa’eera. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Tajaajilli gabaa Googilii beeksisa keenya sarara irratti akka fayyadamnu caalumatti kan nuuf heeyyamu fi fayyadamtoonni qofti beeksisaa isaanii guutummaatti fedha isaanitiin akka fayyadamaniif kan gargaaru dha. Wayita fayyadamaan, fakkeenyaaf, beeksisa oomisha isaa weebsaayitii biroo irraatii argu rimaarkeeting jedhama. Kaayyoo kanaaf, lakkaddaan Googilii Googiiliin kan raawwatamu fi tajaajilli gabaa Googilii yoo hojjetuudha gabaa al lamaa- giraafiksii hin mul’atiin yookan lakkaddaa “web beacons”—jedhamee kan waamamu weebsaayitii wajjin wal qabateera. Rimarkeetingi jedhame fayyadamuun, kuukii dhuunfaan fkn faayila xiqqoo, meeshaa fayyadamaa irratti kan qusatamu (qoofa kuukii tekinoolojii wal fakkaatoo fayyadamu ni dandeenya). Faayilli kun kan ibsu fayyadamaan kan daawwatu, qabiyyee inni ilaalu, bakka inni itti bu’u, browusarii fi sirna hojii ilaalchisee odeeffannoo tekinikaala kan walitti qabu, weebsaayitii caqasuun, yeroo daawwannaa, fi daataa biroo walitti dhiyeenya qaban tajaajila qilleensa irraa ni galmeessa.
Teessoon IP fayyadamaa akkasuma ni qabatama, kunis qixa Xinxala Googiliitiin, Teessoon IP miseensa Gamtaa Awuroppaa keessatti xiqqaachuu ni danda’a yookan naannoo dinagdee Awuroppaa dhimma adda ta’een gara sarvarii Googiliitti USA keessatti xiqqaatee jiraachu danda’a. Teessoon IP tajaajila Googilii biroo wajjin daataan fayyadamaa wal hin qunnamu. Odeeffannoon gubbaa madda biroo irraa odeeffannoo wal fakkaatuun walqunnamuu ni danda’a. Fayyadamaan marsariitii biraa itti fufee kan fayyadamu yoo ta’e, akka fedha isaatti beeksisa isaa irratti xiyyeeffachuu ni danda’a.
Adeemsi hojii Tajaajila Gabaa Googilii itti fufinsaan ta’uu qaba. Kana jechuun Googiiliin daataa kana qusachuu hin danda’u kunis kan akka maqoolee yookan teessoo imeelii fayyadamaa garuu daataa qabatamaan bu’uura fayyadamummaa eenyumma kuukii keessatti itti fufinsaan ni ilaalama. Qixa Googiliitiin, beeksisi cimsamee adda ba’ee hin mul’atu fihin ilaalamu kunis namatti garuu abbaan qabeenyaa kuukii eenyummaa jedhame qabaachuu ni danda’a. Googiliin itti fufinsaan daataa kana hin fayyadamu yoo fayyadamaan itti fufinsaan heyyamu isaa ibse malee. Daataan Tajaajila Gabaa Googiliitiin waa’iin fayyadamaa walitti qabame gara Googilitti darbee fi sarvarii Googilii USA irratti qusatame ta’a.
Akkasuma nuyi tajaajiala Googilii guddisuu marsariitii keenya irratti ni hojjenna. Googilii gahaa gochuun qorannoo A/B jedhamu akka fayyadamnuuf nu gargaara kunis jijjiramni adda addaa marsariitii akkamitti akka miidhu irra deebi’ee ijaara (fkny jijjiirama galtee dirree kkf). Kaayyoo kanaaf kuukiin meeshaa kee irratti qusatameera. Daataa hundi akkaata kanaan qusatame itti fufinsaan ta’uu isaati. Caalumatti, Bulchaa Googilii xiinxala Googilii fi tajaajila gabaa marsariitii keenya irratti fayyadamnee haaluma walfakkaatuun ni bulchina.
Akkasuma Tajaajila Gabaa Googilii fayyadamuu yoo barbaadde keessuma beeksisa irratti, filannoo Googilii kana fayyadamuu ni dandeessa. http://www.google.com/ads/preferences.
10. Fuula Kitaabaa, Amala Dhaggeeffattoota, fi Tajaajila Gabaa Fuula Kitaabaa
Tajaajila sarara keenya ilaalchisee hojii daldalaa fi gahomsuu fi fedha xiinxala seera keenya keessumaa kaayyoo isaa ilaalchisee, hojii tajaajila Fuula Kitaabaa, Fuula Kitaabaa meeshaa neetworkii hawaasa ilaalchisee kanneen armaan gadii irratti ni hojjenna1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, or, if you are resident in the EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Fuula Kitaabaa kara hojiimaata wabummaan isaa seera eegumsa daataa Awurooppaatiin ilaalamee galmaa’era. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Piikselii Fuula Kitaabaatti fayyadamuun, Fuulli Kitaabaa tajaajila sarara gubbaa keenya akka gareetti adda baasee qoodera (“Facebook Ads”). Firiin isaa, Piikselii Fuula Kitaabaa fayyadamnee beeksisoota Fuula Kitaabaa keenya fayyadamtoota Fuula Kitaabaa qofaaf mul’ifnee bu’uura hirmaannaa fedhitiin tajaajilli qilleensa gubbaa keenya yookiin akka caasaan tokko ibsametti (fkn fedha mata duree yookiin oomisha, weebsaayitii daawwatame fayyadamuun) kan Fuulli Kitaaba haasawaa godhamu (“Maamiltoota Garaagaraa”).
Akkasuma nuyi Piikselii Fuula Kitaabaa fayyadamnee fayyadamaan beeksisa Fuula Kitaabaa fedha isaan fayyadamuu mirkaneessuuf gargaara. Piikselii Fuula Kitaabaatti fayyadamuun, bu’aa qabeessummaa beeksisoota Fuula Kitaabaa ilaaluu ni dandeenya kunis kaayyoon isaa istaatiksii fi qorannoo gabaatiif ilaalchi fayyadama gara weebsaayitii keenyaatti akka qajeelfamu beeksisa Fuula Kitaabaa (“Jijjirama”) gochuuf nu gargaraa.
Piiseiliin Fuula Kitaabaa hatattaamaan Fuula Kitaabaa wajjin kan qindoome fi marsariitiin keenya yoo galtee qabaatedha; kuukii kuusuu danda’a, kkf, faayila xiqqaa, mi’a kee irratti. Fuula Kitaabaa keessa yoo seente yookiin daawwatte tajaajila qilleensa irra daawwattee eenyummaa kee beeksisuu dandeessa. Daataan walitti qabame fayyadamuuf rakkisaa waan ta’eef fi akka gidduugaluuf hin heyyamiin. Garuu, daataan Fuula Kitaabaatiin qusatamee fi hojjetamee, walitti hidhinsi eenyummaa fayyadama fi Fuula Kitaabaan kaayyoo qorannoo gabaatiif fi beeksisaaf ni hojjetama.
Kaayyoo araaratiif daataa kamiyyuu Fuula Kitaabaa irratti qooduu ni dandeenya, garuu Fuula Kitaabaatti ergamuu dura biroowusarii naannootiin https ilaalamu qaba. Kun daataa Fuula Kitaabaa haala wal fakkaatuun xaxamee wajjin tokko gochuuf qofa kan hojjetamudha.
Karaa Fuula Kitaabaa daataa hojjechuun imaammata dhuunfaa Fuula Kitaabaa kan bu’ureeffateedha. Odeeffannoon dabalataa mul’achuu beeksisoota Fuula Kitaabaa ilaalchisee imaammata dhuunfaa Fuula Kitaabaa irratti argamuu danda‘ahttps://www.facebook.com/policy.php. Odeeffannoon addaa fi ibsi bala’aan Piikselii Fuula Kitaabaa fi akkamitti akka hojjetu kutaa gargaarsa Fuula Kitaabaatiin ni argama.:https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Daataa Piikselii Fuula Kitaabaatiin walitti qabuu fi Daataan kee Piikselii Fuula Kitaabaa irratti akka mul’atu gochuu ni dandeessa. Akaakuu beeksisaa Fuula Kitaaba kee irratti mul’achuu qabu murteessuuf, peejii Fuula Kitaabaa dhimma kanaan wal qabatu banuu dandeessa, akkasumas bu’uura beeksisa fayyadamaatiin qajeelfamoota hordofi.https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Yoomessi kun of danda’aadha, fkn kompuutara minjaalaa yookiin meeshaale akka moobaayilaa kamiifuu ni hojjeta.
11. Xalaya (Bakka hojii irra olutti)
Odeeffannoon armaan gadii waa’ee qabiyyee xalayaa keenya ni ibsa; galmaa‘u, gabaasa, fi adeemsa madaalli istaatiksii; fi mirga haqamuu kee of keessatti hammata. Xalayaa keenyatti galmaa’uun, adeemsa jedhamee haala walfakkatuun mirkanaa’e siif kennama.
Qabiyyee Xalayaa: Xalayaa, imeelii, fi ergaa elektirooniksii meeshaalee beeksisaa (kana booda Xalayaa) addumaan mirkaneessa fudhataa of keessatti qabata. Xalayaan keenya odeeffannoo pirojeektii keenya ilaallatu, garee, deeggarsa yeroo battalaa, gochoota, fi waa’ee dhaabbata keenya of keessatti haammata.
Godh-Filannoo Lamaa fi Seensaafi Ba’iinsa: Xalayaa keenyatti galmaa’uun karaa adeemsa filannoo lamaa raawwachuu ni danda’a. Kana jechuun galmee irratti, imeelii gaaffi galmee mirkaneessa irratti gaafatte ni fudhatta. Mirkaneessi kun namooti teessoo imeelii mataa isaaniitin akka galmaa’aniif gargaara. Galmee xalayaa adeemsa sanada galmee bu’uura barbaachisummaa isaatiin mirkaneessuuf gargaara. Kunis yeroo galmee kuusuuf fi akka teessoo IP tti mirkaneessuu of keessatti haammata. Jijjiramni daataa kee irratti raawwatu kamiyyuu karaa dhiyeessa tajaajila gabaasa keenya ni kennama.
Daataa Galmeessuu: Xalayaa keenyatti galmaa’uuf teessoo imeelii kee qofa dhiyeessuutu sirraa barbaadama. Maqaa akka filannooti dhiyeessuun xalayaa keenya irratti akka dhuunfaatti si galmeessuu ni dandeenya.
Dhiyeessa Tajaajila Gabaasa: Xalayaa gabaasuuf, dhiyeessa tajaajilaa kan ta’ee Episerver GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Barlinni hojjechiifna kunis dirqama seera eegumsa daataa ilaaluuf nu kennameen fi addumaan xalayaa kee gara WHHtti gabaasuf ta’a. Daataa kee addumaan giddugala daataa Awurooppaatti ni kuufama.
Imaammata dhuunfaa dhiyeessa tajaajila gabaasa keenya as irratti daawwachuu ni dandeessa: https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/.
Qoranno Istaatiksii fi Xiinxala: Xalayaan jedhame kun “web beacon”,fkn faayila hangi isaa Piikselii ta’ee kan qusatamu yeroo xalayaan gabaasa sarvarii dhiyeessa tajaajila irratti gabaafamuudha. Qusannoo kaayyoo kanaaf, odeeffannoon tekinikaala- kan akka biroowusarii fi sirna odeeffannoo, teessoo IP kee, fi yeroo qusannaa walitti ni qabama. Odeeffannoon kun fooyyessa tekinikaalaatiif ni fayyada kunis bu’uura teekinika daataatin yoo ta’u, kaayyoon garee fi amalli dubbisuu isaanii bu’uura galtee naannoo (karaa teessool IP tiin kan murtaa‘u), yookiin yeroo galumsaatiin ta’a. Malli walitti qabinsa istaatiksii daataa murtii xalayaa banuu, yeroo banamu, weebsaayiti itti bu’ame of keessatti ni hammata. Akkasuma odeeffannoon xalayaa sababa tekinikaalaaf fudhachuu wajjin kan walqabatu fi dhiyeessi tajaajila gabaasa fayyadama dhuunfaa to’achuu fi madaallii kun amala dubbisuuf beekamtii kennuu fi fayyadamaan qabiyyee keenya sirreessee fayyadamuu yookiin qabiyyee adda addaa fayyadamtoota garagaraatti rabsuu kunis fedha nama dhuunfaatiin kan ta’u hin hordofnu.
Kan hingalmoofne/Kan Haqame: Hin galmaa’in- qabiyyee xalayaa keenyaa yeroo kamiyyuu argachuu ni dandeessa. Kun qabiyyee kee fi dhiyeessa tajaajila gabaasa fudhachuu kee fi xinxala istaatiksii kee addaan kutuu danda’a. Garuu akka tasaa adda baasuun gabaasa , dhiyeessa tajaajila gabaasa yookiin madaalli istaatiksii addaan kutuun hin danda’amu. Xumura xalayaa irratti weebsaayitii hin galmoofne argachuu ni dandeessa. Xalayaa irratti galmooftee fi osoo hin turiin yoo addaan kutte, odeeffannoon dhuunfaa kee haqamuu ni danda’a.
12. Footoogiraafii, Vidiiyoo (Kiliippota),...
Suuraawwan fi vidiyoowwan (kiliipponni),...., marsariitii kana irratti fayyadan hawaasaaf dhiyaataan footogiraafarootan, ageentii footoogiraafiitin yookiin namoota dhimmi isaa ilaallatuun mirkanaa’e hojjetamu. Abbaan qabeenya fi liqiin footoogiraafii beeksisa mirga kooppiitiin kan dhiyaatu ta’ee bifa suuraan yookiin daataa footoogiraafii gudda. Bu’uurri seera kanaa § 6.1(f) GDPR.
13. Qabiyyee fi Tajaajila Qaama Sadaffaa Wajjin Hojjechuu (Barbaachisa Bakka Ta‘etti)
Bu’uura fedha seera keenyaatiin qabiyyee fi tajaajila Dhiyeessitoota Garee- Sadaffaa tajaajila sarara irratti akka hojjetan ni taasifna (fedha xiinxala, gahoomsuu, fi hojii daldalaa sarara irraa of § 6.1(f) GDPR) ) qabiyyee fi tajaajila isaanii kan akka Vidiyoo (kana booda “Qabiyyee” jedhamee kan waamamu). Kun yeroo hundumaa Dhiyeessitoota Garee- Sadaffaa qabiyyee kana teessoo IP fayyadama akka argatan barbaachisa, sababi isaa teessoo IP ala qabiyyee kana erguun hin danda’an. Teessoon IP qabiyyee kana mul’isuuf barbaachisaadha. Qabiyyee qofa fayyadamuudhaan dhiyeessitoonni kun dhuunfaan teessoo IP isaanii fayyadamuu danda’u. Dhiyeessitoonni qaama sadaffaa WebBacon kaayyoo gabaatiif fayyadamuu danda’u. Taagii Piikselii fayyadamuun tiraafikiin daawwattoota fuulli waraqaa isaa madaalamuu ni danda’a. Dabalataanis, odeeffaannoon itti fufaan kuukii fayyadamaa irratti kuufamuu danda’a kunis odeeffannoo tekinikaala ofitti dabalatee kunis waa’ee biroowusarii fi sirna hojii, weebsaayitii caqasuun, galumsa yeroo, fi daataa dabalataa maddaa odeeffanno biroo wajjin walqabataniin walqunnamuu qabu.
Kanneen armaan gadii qabiyyee dhiyeessa garee- sadaffaati. Akkusumas walitti hidhinsa kan dhiyeessu fi odeeffannoo biroo adeemsa daataa fi kanneen keessa hammi tokko kan ibsaman:
Tajaajilli kaffaltii garee sadaffaa (fkn. Paypal Sofortüberweisung, kaffaltii qilleensa irraa bu’uura Munich) tumaalee fi haalonni akkasumas imaammanni dhuunfaan kara weebsaayitii Dhiyeessa Garee-Sadaffaatiin hojii irra ni oola.
Kaartaan Googlii Dhiyeessa Garee-Sadaffaatiin 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Imaammanni dhuunfaan: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt out: https://www.google.com/settings/ads/
Vidiyoon “YouTube” Dhiyeessa Garee-Sadaffaatiin1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Imaammanni dhuunfaan: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt out: https://www.google.com/settings/ads/
Hojiin twitariidhaan dhiyaatu karaa tajaajila qilleensa irraa ni qindaa’a. Hojiin jedhame karaa twutarii kanaa ni dhiyaata Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twutarii fayyadamuun “retweet” kan jedhamu weebsaayitiin herrega twutarii wajjin akka walqunnamu ni ta’a. Kuta kana keessatti daataan gara twutaritti ni darba. Akka dhiyeessaa weebsaayititti, qabiyyeen daataa darbuu twutariin hin fayyadu. Imaammanni dhuunfaan twutarii kan argamutwitter.com/privacy. Eegumsa jijjirama daataa twutarii kee http://twitter.com/account/settings.
14. Mirga Fayyadamaa Keenya
Bu’uura gaaffii fi mirkaneessaatiin kana barreessuu keenyaaf gammachuu nutti dhaga’ameera kunis seera daataa dhuunfaa fudhatama qaban keessuma si ilaalchisee hojiimaata ni qabaata. Dhimma kana keessatti, odeeffannoo bala’aan daataa dhuunfaa kan ibsame § 15 GDPR.
Daataa dhuunfaan si ilaallatu sirrii ta’uu baatus, mirga hatattaamaan sirreessuu qabda kunis bu’uura (§ 16 GDPR).
Mirga daataan dhuunfaan kee hatattaaman akka haqamu gochuu qabda, kunis dimshaashaan § 17 GDPR irratti tarreeffameera.
Akkasumas mirga adeemsa kana dhorkuu qabda kana keessaa tokko kan § 18 GDPR applies fakkeenyaaf wayita qormaata to’achuu of keessatti qabata.
Daataa dhuunfaa waa’ee ilaallatu sababoota waliigalaa irraa madduu danda’an mirga mormuu qabda. Kubbaaniyaan keenya daataa dhuunfaa jedhame dhabuu danda’a garuu, bu’uura hundeeffama, hojiimata fi seerota (§ 21 GDPR) ta’uu qaba.
Loogii qaama bulchiinsa irratti ta’uu malee mirga sanada kee ilaaltee abbaa tayitaa to’ataatti kennuu qabda fi kunis bu’uura GDPR (§ 77 GDPR) ta’uu qaba. Mirgoota karaa abbaa taayitaa to’ataatiin hojjechuu dandeessa fi bakki jireenyaa kee, bakki hojii kee keessatti mul’achuu qaba. Kaaba Rhine–Westphalia, namoonni armaan gadii kan ajajaniidha:
Ofisara eegaa daataa Kaaba Rhine–Westphalia (LDI)
15. Daataa Haquu
Daataan kuusne akka hin barbaachifne akkuma hubatameen ni haqamu fi yeroo turmaataa kamiyyuu sarbuu hin danda’an. Akkuma kanaan dura jennee turre daataan fayyadamaa hin haqamu sababni isaa kaayyoo seeraa biroof barbaadamuu danda’u. Kana jechuun daataa akka kanaa kaayyoo biroof hojii irraa hin oolu. Kun hojii irraa kan oolu, fakkeenyaaf, daataan fayyadama daldalaaf yookiin kaayyoo taaksiif yoo barbaadameedha.
Bu’uura seerotaatiin § 257.1 HGB (German Commercial Code) waggaa ja’aaf turuu qaba (Ibsa faayinaansii waggaa, nageewwan kkf) fi bu’uura 147.1 AO (German Revenue Code) waggaa kudhaniif turuu qaba (kitaabolee, galmeewwan, gabaasa manajimantii, naga’eewwan, sanadawwan, taaksii qabatamaa kkf).
16. Mirga Mormuu
Fayyadamaan mirga hojii irra oolu gara fulduraa daataa dhuunfaa isaanii mormuu ni danda’u kunis beeksisa kallatti dabalatee. Mirga mormuu kee ni kabajna nuyi dirqamaan gaaffi daataa hojii irraa hin oolchinu.
17. Adabbii Hidhaalee
Wayita walitti hidhinsi hojjetamu qabiyyee seera qabeessaa hin ta’in akka hin labsamne ni ibsina. Deutsche Welthungerhilfe e.V. dizzaayinii, qabiyyee, yookiin abbummaa fuula walitti hidhamanii ammaa fi gara fulduraa irratti dhiibbaa hin geechisu. Dhimma akka kanaa keessatti, qabiyyee hunda irraa akka of fageessinu kunis fuula walitti hidhame erga waliti hidhinsi umame booda kan jijjirame ibsuu barbaanna: kunis hidhata hunda irratti fi caqasa jiru irratti hojiimaata ni qabaata. Dhiyeessa qofti caqasa fuula ilaaluun kunis idaa seera qabeessa hin ta’in, sirrii kan hin ta’in, qabiyyee guutuu hin ta’in fi badii fayyadamuu irraa maddu yookiin odeeffannoo dhiyaate haala malee fayyadamuu hin dabalatu.
18. Beeksisa Maatiif fi Eegduu Seera Qabeessaaf
Maatii fi eegaan seera qabeessi dhimmaa dhuunfaa ijoollee isaanii eeguuf ittigaafatamummaa qabu. Haalota ittigaafatamummaa fi qusannoo daataa dhuunfaa daa’immani akkamitti akka qabamu gaafannee irratti haasoftaniittu.
19. Foyyessa Imammata Dhuunfaa
Adeemsa hojii daataa, tajaajilaawwan fi jijjirama seeraa qabachuuf mirga foyyeessa imaammata dhuunfaa ni eegna. Garuu, adeemsa daataa ilaalchisee qofa hojiimaata ni qabaata. Akkuma kanaan dura haasofnee turre yookiin caasan imaammata dhuunfaa qajeelfamoota of keessatti kan haammate fi kunis walitti dhufeenya kontiraataa fayyadamtoota, gaaffiin fooyyeessaa hojii irra kan oolu bu’uura mirkaneessa fayyadamaatiin kan raawwatudha.
Fooyyessa kana imaammata dhuunfaa irratti buusnee guyyaa akka dubbistuuf yaada si kennina.
20. Gaaffilee yookiin Yaadota kee
Gaaffiiwwan, ilaalchawwan fii imaammata dhuunfaa ilaalchisee komii yoo qabaatte, gara Ofiisara eegumsa daataa keenyaatti baga nagaan dhufte. Karaa imeelii keenyaa datenschutz@welthungerhilfe.de nu qunnamuu dandeessa yookiin kara teessoo poostaa keenya “Gara Ofiisara Eegumsa Daataa” jechuudhaan. Daataa kee irraa odeeffannoo fudhachuu, jijjiiruu yookiin haquu yoo barbaadde, private donor servicen nu qunnamuu dandeessa.